जस्तोसुकै अवस्थामा पनि चीन नेपालको पक्षमा – नेपाली समाचारको स्रोत – bhandaforaviyan.com
सहिद ऋतु मार्गमा वृक्षारोपण कार्यक्रम सम्पन्न
रोट्र्‍याक्ट क्लब अफ भरतपुर हाईटको अध्यक्षमा श्रेष्ठ।
जस्तोसुकै अवस्थामा पनि चीन नेपालको पक्षमा
| प्रकासित मिति : १६ असार २०७७, मंगलवार ०३:१९
नेपाल र चीन असल छिमेकी मित्र हुन् । सन् १९५५ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएयता दुईपक्षीय सम्बन्ध पारस्परिक सम्मानमा आधारित रहँदै आएको छ । ऐतिहासिक यातायात तथा पारवहन सम्झौताले दुईपक्षीय सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पु¥यायो भने हिमाली सीमा अब समस्याका रूपमा नरहेको सन्देश पनि दियो । नेपालका लागि चीनका राजदूत होउ यान्छी यतिबेला स्थापित घनिष्ठ दुईपक्षीय सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउन सक्रिय हुनुहुन्छ । उहाँसँग द्विपक्षीय सम्बन्धका विभिन्न आयामबारे गोरखापत्रका लागि सम्पादक सल्लाहकार
ले गर्नुभएको संवादको सम्पादित अंश :
नेपाल–चीनबीच सन् १९५५ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएदेखि यता दुई देशबीचको सम्बन्धलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?
हिमाल तथा नदीहरूले जोडिएका नजिकका छिमेकी चीन र नेपालबीचको सम्बन्ध लामो समयदेखि स्थिर रहँदै आएको छ । सन् १९५५ मा दुई देशबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएदेखि हामीले पञ्चशीलका आधारमा शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वलाई आत्मसात् गर्दै सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध विकास गरेका छौँ । यो ६५ वर्षको अवधिमा दुई देशबीच आपसी राजनीतिक विश्वास निरन्तर सशक्त बन्दै आएको छ भने अन्य विभिन्न क्षेत्रको सम्बन्ध बीआरआई (बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ) को परिधिमा आधारित भएर जनता–जनताबीचको आवतजावत सम्बन्ध पनि बलियो बनेको छ ।
सन् २०१९ मा चीन र नेपालबीचको व्यापार साढे एक अर्ब डलर पुगेको छ । गत वर्ष सन् २०१९ मा करिब एक लाख ७० हजार चिनियाँ पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरे । नेपाल भ्रमण गर्ने विदेशी पर्यटकहरूमा चीन दोस्रो ठूलो देश बनेको छ । नेपालको तथ्याङ्कअनुसार ऋण तथा अनुदान दिने विकास साझेदार देशहरूमध्ये चीन पहिलो नम्बरमा छ । त्यसमध्ये एक अर्ब ६० करोड डलर अनुदान रहेको छ । यो बहुपक्षीय तथा दुईपक्षीय विकास साझेदारहरूमध्ये पहिलो नम्बरमा आउँछ । दुवै पक्षले आपसी हित जोडिएको विषयमा जहिले पनि एकआपसका भित्री चाहनालाई समर्थन गर्दै आएका छन् । फरक–फरक आकार भए पनि दुई देश समानता, भ्रातृत्वपूर्ण सहकार्य र दुईपक्षीय हितमा आधारित सम्बन्धको नमुना बनेका छन् । यो एकदमै महŒवपूर्ण कुरा हो कि गत वर्ष चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा दुवै देशका राष्ट्रपतिहरूले दशकौँदेखिको भ्रातृत्वलाई आधार मान्दै विकास र समृद्धिका लागि आपसी सम्बन्धलाई रणनीतिक साझेदारीको तहमा विकास गर्ने सहमति गर्नुभयो । आदानप्रदान गर्नुपर्ने महसुस गर्नुभयो । यसबाट हाम्रो सम्बन्ध नयाँ युगमा प्रवेश गर्नुका साथै थप विकासका लागि ऐतिहासिक अवसर प्राप्त भएको छ ।
विश्वलाई प्रभावित पारिरहेको कोभिड–१९ को पहिलो सङ्क्रमित केस चीनमा देखिएको थियो । तर, चीनले थोरै समय र थोरै मानवीय क्षतिमै नियन्त्रणमा लियो । यो कसरी सम्भव भयो ?
कोरोना भाइरसको पहिलो केस चीनमा देखिएको रिपोर्ट सही हो । हामीसँग यस्ता महामारीविरुद्ध एकताबद्ध भएर लडेका थुप्रै अनुभव छन् । म केही अनुभव राख्न चाहन्छु । पहिलो, हामीसँग बलियो नेतृत्व तथा प्रभावकारी प्रशासनिक संयन्त्र छ । राष्ट्रपति सी चिनफिङको निर्देशन तथा नेतृत्वमा हामीले सरकारका सम्पूर्ण शक्ति तथा स्रोतहरू संयुक्त रूपमा परिचालन गर्दै सङ्घर्षमा उत्रियौँ । हामीले देशव्यापी रूपमा नियन्त्रणका कडा उपायहरू अपनायौँ भने महामारीको केन्द्रबिन्दु बनेको वुहानलाई सहयोग गर्नका लागि विभिन्न स्थानबाट स्वास्थ्य आर्थिक संयन्त्रहरू केन्द्रित ग¥यौँ । महामारीको अवस्था हेरेर विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न तहका जोखिमको वर्गीकरण गर्नुका साथै त्यसको नियन्त्रणका लागि क्षेत्रगत रूपमा सार्वजनिक गतिविधि कम गर्ने छुट्टाछुट्टै उपायाहरू अपनायौँ ।
दोस्रो, नियन्त्रणका वैज्ञानिक विधिहरू अपनायौँ । हामीले अग्रिम पहिचान, अग्रिम रिपोर्टिङ, अग्रिम आइसोलेसन र अग्रिम उपचारको नीति अपनायौँ । सङ्क्रमितहरूसँग सम्पर्कमा आएकाहरूको तत्काल पहिचान तथा परीक्षण हुनुपर्नेको तत्काल परीक्षण, अस्पताल भर्ना हुनुपर्नेलाई तत्काल अस्पताल भर्ना, आइसोलेसनमा राख्नुपर्नेलाई तत्काल आइसोलेसनमा राख्यौँ ।
तेस्रो, कुनै पनि हालतमा सङ्क्रममितहरूको जीवनरक्षा गर्न सबै प्रकारका शक्ति प्रयोग ग¥यौँ । हामीले उपचारका सङ्ख्या वृद्धि गर्ने तथा मृत्युदर घटाउने विषयलाई प्राथमिकता दियौँ । भाइरसविरुद्ध सङ्घर्ष गर्न सबैभन्दा सशक्त व्यक्ति तथा सप्लाइलाई अग्रमोर्चामा राख्दै तुरुन्तका तुरुन्त वितरण ग¥यौँ । प्रो एक्टिभ, विज्ञानसम्मत र चलायमान उपचारका विधिहरू अपनायौँ, जसले मात्र ३० घण्टाका बच्चादेखि सय वर्ष पुगेकासम्मका बिरामीको उपचारमा सबै प्रकारका सम्भावनाहरू प्रयोग ग¥यौँ । हाम्रो उद्देश्य हरहालतमा कुनै पनि व्यक्तिको जीवनरक्षा हुनुपर्छ भन्ने थियो ।
ठूलो प्रयत्नका बाबजुद चीनमा महामारीको अवस्था सामान्यतः नियन्त्रणमा आएको छ । तर, अझै पनि बाह्य क्षेत्रका कारण महामारी पुनः देखिन सक्ने जोखिम कायमै छ । चीन आन्तरिक तथा बाह्य क्षेत्रबाट हुने सङ्क्रमणलाई समयमै पहिचान गरेर, तत्काल कम गर्न तथा प्रभावकारी उपचार गर्दै जनताको स्वास्थ्य सुरक्षाको ख्याल गर्दै आर्थिक तथा सामाजिक जीवनलाई निरन्तरता दिन कटिबद्ध छ ।
कोभिड–१९ सँग चीनलाई जोडेर अनेकौँ हल्ला तथा मिथकहरू चर्चामा आएका छन् । यी सबका बाबजुद चीन यो महामारीबाट विश्वभर नराम्ररी प्रभावित देशहरूलाई सहयोग गरिरहेको छ । यस्तो निराधार आरोप आउँदा तपाईंहरूलाई कस्तो महसुस हुन्छ ?
महामारीको सुरुवातदेखि चीनले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनमार्फत समयमै विश्व समुदायलाई खुला, पारदर्शी र जिम्मेवारपूर्ण तरिकाले सङ्क्रमण रोक्न सशक्त मापदण्डहरू लागू गर्दै सूचित गरेको हो । हामीलाई ठूलो मात्रामा स्वास्थ्य सामग्रीहरूको आवश्यकता परिरहेको बेला पनि एन ९५ मास्क, पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्वीपमेन्ट (पीपीई), न्युल्कि एसिड टेस्ट कीट र अन्य सहयोगहरू १२० देश तथा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई सहयोग ग¥यौँ । यसबाहेक थुप्रै देशहरूलाई उनीहरूको मागअनुसार व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रवाहित ग¥यौँ । भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत यसको नियन्त्रणका लागि हामीले अपनाएका विधि तथा मापदण्डहरूबारे अनुभव आदानप्रदान ग¥यौँ । चीनको यो प्रयत्नलाई विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) तथा थुप्रै देशहरूले प्रशंसा गरेका छन् ।
दुर्भाग्य, केही पश्चिमा देश तथा राजनीतिज्ञहरूले यो महामारीलाई राजनीतिकरण गरेर आफ्नो व्यक्तिगत तथा राष्ट्रिय स्वार्थका लागि चीनविरुद्ध अफवाह फैलाउने साधनका रूपमा प्रयोग गरे । यो उनीहरूले आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गरेर भोट सङ्कलन गर्न चालेको एक गैरजिम्मेवार कदमबाहेक केही हैन । यस्तो प्रकारको ‘इन्फोडेमिक’ काम चीनले महामारीविरुद्ध लड्न चिनियाँ जनताको योगदान तथा चीनको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगको गरेको सक्रिय सहकार्यको घोर अपमान हो । यो विश्वभरका जनताले कोरोना भाइरसको महामारीविरुद्ध लड्न संयुक्त रूपमा गरेको प्रयत्नविरुद्ध हुन जान्छ, जो सिङ्गो मानवीयताका लागि खतरा हो ।
हामी कडाइसाथ यस्ता गैरजिम्मेवार र आधारहीन आरोपहरूको खण्डन गर्दछौँ र सबै देशहरूलाई महामारीविरुद्ध एकताबद्ध भएर लड्न अपिल गर्दछौँ । कुनै पनि देश आफूमात्र यो भाइरसबाट बच्न सक्दैन । खराब अफवाह तथा आधारहीन प्रत्यारोपले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सहकार्य गर्दै अघि बढ्नुपर्ने कदमलाई झन् समस्यामा पार्नेछ । चीन, नेपाललगायत अन्य विभिन्न देशहरूलाई यो सङ्घर्षमा सहयोग गर्न तत्पर छ । हामी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहकार्य गर्दै पब्लिक हेल्थका लागि सम्पूर्ण मानव समुदायका लागि यो महामारीविरुद्धको सङ्घर्षमा विजय प्राप्त गर्न आफ्नोतर्फबाट योगदान गर्न तयार छौँ ।
यो कठिन अवस्थामा तपाईं आफ्नोतर्फबाट नेपाली जनतालाई केही भन्न चाहनुहुन्छ ?
म यही भन्न चाहन्छु कि ‘अकबरी सुनलाई कसी लगाउनुपर्दैन’ । परिवर्तित र पटक–पटकको परीक्षणबाट नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध अकबरी सुन भन्ने स्पष्ट भएको छ । जस्तोसुकै कठिन अवस्थामा पनि चीन नेपालको पक्षमा दह्रोसँग उभिनेछ । हामी विश्वास गर्छौं कि सरकारको प्रयत्न तथा दुई देशबीचको सहकार्यबाट हामी निश्चित रूपमा यो महामारीविरुद्धको सङ्घर्ष जित्नेछौँ । म त्यो सुनौलो दिनको प्रतीक्षामा छु । अनुवाद : राजेश चाम्लिङ राई/गोरखापत्र देनिकबाट साभार
सशस्त्रमा एसपी र डीएसपीको चलखेल